MACLUUMAADKA TARANKA YAR EE SCHNOXIE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Yar ee Schnoxie Dog iyo Sawirro
Dachshund / Gunta yar ee Schnauzer eeyaha isku dhafan
'Tani waa Chuck Norris. Chuck waa a Gunta yar ee Dachshund / Gunaanad Schnauzer isku dhafan Miisaankiisu waa 13 rodol. waana sanad jirsaday sawiradan. Wuxuu jecel yahay inuu ahaado xarunta dareenka, gaar ahaan haddii ay ku lug leedahay daaweyn. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale iyo aadanaha oo aad ugu dhoolla caddeeya jihada.
Gunta yar ee Schnoxie ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dachshund iyo Gunaanad Schnauzer . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Chuck Norris the Gunta yar ee Dachshund / Gunaanad Schnauzer isku qas (Miniature Schnoxie) oo jira 1 sano, miisaankiisuna yahay 13 rodol
Gwen the Miniature Schnoxie (nuska yar Schnauzer / badh Miniature Doxie) isagoo jira hal sano— Iyadu waa balanbaaliskeyga bulsheed waxayna jeceshahay qof walba, xitaa bisadaha! Iyo haa, kuwani waa indhaheeda. Waxay ku habboon tahay shakhsiyaddeeda halka mararka qaarkood ay tahay shaydaanka indhaha buluugga ah, kuwa kalena ay tahay gabar indho macaan oo bunni ah!
Eskimo Maraykan darka sarkaal oo dahab ah
macluumaad ingiriis duug ah
sarkaal oo dahab ah qas iyo sahashan indhaha buluuga ah
qasnado isku dhafan oo isbaanish ah oo lagu qaso rummaanka